Garbahaareey oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cillmiyeedka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Garbahaareey oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cillmiyeedka
Garbahaareey oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cillmiyeedka
Habeenka 19-aad tartan cilmiyeedka warbaahinta Qaranka ee uu taabagelinayo maamulka gobolka Benaadir, waxaa ku tartamay degmooyinka Wadajir oo ka tirsan gobolka Benaadir iyo Garbahaareey oo ka tirsan gobolka Gedo.
Qeybta hore ee tartanka degma walba waxaa la weydiiyey afar su’aal, sidoo kale waxaa lagu soo gudbiyey isbarasho kooban oo ku aaddan labada degmo.
Degmada Wadajir ee gobolka Benaadir waxaa la weydiiyey toddoba su’aal waxa ay si sax ah uga jawaabbeen hal su’aal, waxa ay iska qaldeen Lix, wax ka faa’ideysi ahna ma helin, sidaas ayeey ku heleen laba dhibcood (2 dhibcood).
Degmada Garbahaareey ee gobolka Gedo, waxaa iyaguna la weydiiyey toddoba su’aal waxa ay ka jawaabbeen afar su’aal, saddex ayeey iska qaldeen, su’aal dheeri ahna waa ay ka faa’ideysteen, waxa ay uruursadeen toban dhoibcood (10 dhibcood), degmada Garbahaareey ee gobolka Gedo, ayaana u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka.
Habeen dambe waxaa tatami doonaa degmooyinka Garoowe oo ka tirsan goholka Nugaal iyo Shibis oo ka tirsan gobolka Benaadir.
Previous articleCiidammada amniga oo dad ay ajaanib ku jiraan ka soo badbaadiyey maqaayaddii la wareeraray caawa
Next articleCiidamada Gaashaan oo Soo Gaba-gabeeyay Weerarkii xalay lagu qaaday Pizza House iyo Posh